Kutaura Kwemahara Hakudziviriri Mbiri Yako | Martech Zone
Chishanu, January 27, 2012 Chishanu, January 27, 2012 Douglas Karr
Sam Montgomery muverengi we Martech Zone uye akandibata nezvenyaya yenyaya yechidiki tarenda renhabvu anonzi Yuri Wright. Yuri anga achishandiswa mukutorwa neMichigan State… kusvika vamwe vanhu vaverenga ma tweets ake. Iyo tweets zvinoratidzwa paChat Sports uye haina kuchengetedzeka kubasa (NSFW)… ingo ziva kuti vakanaka zvakashata.
Yuri Wright, 4-nyeredzi CB kubva kuNew Jersey, akambove achienda kuMichigan mukirasi ya2012. Pakutanga mwedzi uno, varairidzi veMichigan vakatarisa zvakadzama mune tarisiro mushure mekunge alumnus ainetsekana atumira maTweets echikoro echikoro ayo Yuri akange atumira padandemutande rake reTwitter zvaive zvisingagamuchirike.
Ini ndataura chaizvo kumayunivhesiti akati wandei nezve izvi uye ndikaudza vadzidzi izvo chinhu chose ivo vari kurekodha mune vezvenhau nhasi chimwe chinhu chinokanganisa kwavo tarisiro yebasa pasi pemugwagwa Vamwe vanovhunduka, vazhinji vanofunga kuti hazvina kunaka… asi chokwadi ndechekuti ani Michigan inotora inoratidzira yakananga yeyunivhesiti yavo.
Michigan yakasarudza chiito chakakodzera zvichienderana nemamiriro ezvinhu. Ndinotenda Mr. Wright akadzidza chidzidzo chakaoma, futi. Ndine chokwadi chekuti ndaingotaura muromo wekutora zvimwe zvibodzwa nevateveri vake uye nekuseka mashoma. Dai aive mutambi, angave akanaka ... asi sezvo ari wekutsvagisa Yunivhesiti ine mukurumbira kuona, izvi ndizvo zvakaitika.
Zvese zviitiko zvaunotora online zvine mhedzisiro. Ndosaka pasina chaicho chakadai Pachena… Zvanyanya opaqueness. Ini handiende munzira yangu yekugumbura vanhu online, asi kunyangwe ini ndinorasikirwa nevateveri nguva nenguva izvo zvisina basa nemanzwiro angu ekuseka.
Kana ini tweet chimwe chinhu chine njodzi, ini handisi kungoisa njodzi kumuteveri, ndiri kuisa njodzi kune vanotsigira bhurogu rangu uye vatengi kubva kwandiri inbound yekushambadzira agency. Iko hakuna nzira yandingaite kuve pachena pachena! Ini ndinoda ma-off-color majee… kunyanya mune zvematongerwo enyika zvisirizvo, zvinonyanya kundinetsa kuseka. Anongova maonero angu, asi chokwadi chekuti munhu wese haana hanya nemazuva ano chinotyisa - kunyanya sezvo hupenyu hwedu huchitamba pamhepo.
Ini ndinogona kurarama nenyaya yekuti ndakarasikirwa nemuteveri uye, pamwe muverengi, asi zvakadaro zvakandinetsa. Zvakandinetsa kuti kune mumwe munhu kunze uko wandinofunga kuti ndiri munhu wandisiri. Asi ndinofanira kuzviisa shure kwangu uye kufambira mberi. Ini handina kukwana, ndichaenda kutsvedza kamwechete munguva. Uye… vamwe vanhu havasi kuzondida. Ingori chokwadi chiri nyore.
Asi ndiri rombo… Basa rangu harisi kutanga. Ini handisi wekutsvaga kana mushandi wemumwe munhu. Handikwanise kufungidzira kuti ndingadai ndiri kupi muhupenyu dai paine Facebook pics, Twitter - kana zvakanyanya - Youtube pandakanga ndiri mumakore angu ekuyaruka. ndanga chose kunze kwekudzora. Ndingangove ndiri kuita basa rakaoma kumwe kunhu!
Akanga akafanirwa nemukana wechipiri here? Hongu… tese tinodaro. Nekutenda akawana imwe apo CU akamusimudza:
Ndakakanganisa zvikuru, ”akadaro Wright. “Chokwadi ndakadzidza chidzidzo chakakosha, uye handivimbise chinhu chakadai kuti chichaitika zvakare. Wese munhu anondiziva anoziva kuti handicho chimiro changu chechokwadi kana kuti zvandiri chaizvo. Ini handisi kuzogara pano ndoyedza kupembedza zvandakaita. Ndiri kungova murume uye nditi ndakanganisa uye ndakadzidza pazviri.
Ndiani anoziva… rimwe zuva ungangoda mukana wechipiri, futi. Ngatiregei kuita chero chinhu chinopenga kunze uko, vanhu! Vanhu vari kuona… uye vazhinji havana kana kuseka.
Tags: nhabvunhabvu inotoramichiganTwitteryuri wright
27% yeVashambadziri Havana Zvirongwa zvePiritsi ... Asi!